ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) : Myanmar Mobile Software Developer
Author Archive: ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD)
Forward Training Center For Android -Huawei,Samsung,Sony -HTC,LG -ADB Commands -Fastboot Command -Firmware Backup,Restore,Upgrade -Downgrade -Firmware Extract -Imei repair -HTC S on/off -Hboot upgrade/downgrade -System Error Solution -Myanmar font(adb,xml,no root) -Bootloader Unlock-Using Tools Kit -Using Tools Box အစရှိသည့် Android နှင့်ပတ်သက်သည် ပညာရပ်များကို အခြေခံမှစပီးသင်ကြားပေးပါမည်။ For IOS -Models & Hardware Devices Architecture -Storage Operating Modes -iTunes […]
Forward Training Center v1.0 (Android Application) ကျွှန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းရဲ့ Apk လေးပါ။ ဒီ App ကနေ Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်ကျတဲ့သူများ အလွယ်တကူ အချိန်စာရင်း၊ စတင်ဖွင့်မည့်ရက်၊ ဘာသာရပ်များ သင်မည့်အကြောင်းအရာများ၊နေရပ်လိပ်စာ အစရှိသည်တို့ကို တစ်ပြေးညီသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအသုံးပြုရင်တော့ Internet လေးလိုအပ်ပါတယ်။ App ထဲဝင်တိုင်း ၃စက္ကန့်သာသာလောက် Update လုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီ App လေးကို ၀ိုင်းဝန်း Share ပေးပါအုံး https://play.google.com/store/apps/details?id=mmsd.phyochan.forwardtraining http://d-h.st/zYx Read More
Honor3C သမားများ ဖန်လုံးကို နိမ့်နိမ့်မြင့်မြင့် တင်ချင်းတိုင်းတင်နည်း
AT YOUR OWN RISK_AT YOUR OWN RISK_AT YOUR OWN RISK =================================================== လိုအပ်သောဖိုင်များကိုအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ – MTK Scatter File – http://d-h.st/rTw SP Flash Tool – http://d-h.st/4iO APP Extractor – http://d-h.st/yrS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> အရင်ဆုံး ကိုယ် ပြန်တင်ချင်သော Firmware ဖိုင်ကိုအရင်ဖြည်ချပေးရပါမည် Extractor ကို run ပါ ပီးလျှင် မိမိ တင်လိုသော update.app ကိုရွေးလိုက်ပါ အောက်က ဘောက်စ်ထဲတွင် […]
August 13, 2014 | 1 Reply
အခုကျတော့ ဖုန်းက IMEI လေး Backup ထုတ်ပီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် – အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ MTK Droid လေးကို အသုံးပြုပီး IMEI လေး Restore လုပ်ပေးလိုက်ပါ – ဖုန်းကို Root အရင်ဖောက်ပါ ပီးလျှင် ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ပီး ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အဆင့်လိုက် လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ ကွန်ပျူတာမှ Root Access တောင်းလျှင် ဖုန်းတွင် Allow လုပ်ပါ ============================================ Restore ခလုပ်နှိုပ်ပီးလျှင် ပထမ bin ဖိုင်ကိုရွေးပေးရပါမယ် —————————–ဒုတိယ tar ဖိုင်ကိုရွေးပေးရပါမယ် ============================================ Reboot ကျပီးပြန်တက်လာလျှင် IMEI လေး ပြန် Check ကြည့်လိုက်ပါ […]
G730-U00 & Honor 3C Font Installer
July 24, 2014 | 1 Reply
G730-U00 & Honor 3C Font Installer Window အတွက် Tool မရေးတာကြာတာက တစ်ကြောင်း ပြီးတော့ Honor တွေ G730 တွေမှာ 123 ရိုက်မရတာတွေရှိနေသေးတော့ ဒီ Tool ကိုရေးလိုက်တာပါ။ Apk ပုံစံအနေနဲ့ကတော့ Ye Lin Aung Kseရဲ့ Apk ရှိပါတယ်။ အရင် ARM Tool Kit တွေရေးတုန်းက C# နဲ့ ရေးပေမဲ့ ကျွှန်တော့်သင်တန်းသားတွေကိုယ်တိုင် .net သွင်းမရတဲ့စက်တွေနဲ့ Error တွေများလို့ Java နဲ့ ဒီတစ်ခါရေးလိုက်ပါတယ်။ Instruction တွေစုံလင်စွာ ပါဝင်တဲ့ Tool ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။ http://d-h.st/tV5 Read More
MM App Font Helper (G730-U00 ကဲ့သို့သောဖုန်းများတွင် မြန်မာ App များအတွင်း Font မပေါ်သည့်ပြသာနာဖြေရှင်းရန်)
G730-U00 ကဲ့သို့သော မြန်မာ App များအပေါ်တွင် ဇော်ဂျီမပေါ်သောပြသာနာကို Auto ဖြေရှင်းပေးမဲ့ Android Application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App ကို အသုံးပြုဖို့ Root Access လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး App ကို စသွင်းခြင်းမှာ Syncing ကြာပါတယ်။ နောက်ပိုင်း App ကိုဖွင့်ပါက ထပ် Syncing လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ မိမိ ပြုလုပ်လိုသော App ကို ဖုန်းအတွင်းသွင်းထားပါ။ ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။ Auto ပြုပြင်ပြီး အဆင့်သင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ App များသာရပါသည်။ Developed By Phyo Chan Icon Design By Han […]
Emotion UI Fonts Installer v1.2 (Root မလို မြန်မာစာသွင်းရန်)
June 23, 2014 | 1 Reply
Software အညွန်း V1.0 Emotion UI ပါရှိသော ဖုန်းများဖြစ်သော Huawei ဖုန်းအများစုတွင် Root Access မလိုပဲ မိမိနှစ်သက်သော ဖောင့် Style ထည့်သွင်းနိူင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ ဖုန်းတွင် Frozenkeyboard မပါရှိပါက Auto သွင်းပေး နိုင်အောင်ထည့်သွင်းထားသည်။ မိမိဖုန်းနှင့် Support မပေးပါက ထည့်သွင်းခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ မိမိဖုန်းနှင့် ကိုက်ညီသော Font ဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်ပြီးမှထည့်သွင်းနိုင်အောင် စီမံပေးထားသည်။ ထည့်သွင်းရန် အညွန်း – – – – မိမိဖုန်းအတွင်းထည့်သွင်းတော့မည်ဆိုပါက Install ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် CUSTOMIZE CURRENT Theme ကိုနှိပ်ပါ။ Font Style ကိုရွေးချယ်ပါ။ မိမိထည့်သွင်းထားသော […]
Emotion UI Fonts Installer(v1.1)
V1.0 Emotion UI ပါရှိသော ဖုန်းများဖြစ်သော Huawei ဖုန်းအများစုတွင် Root Access မလိုပဲ မိမိနှစ်သက်သော ဖောင့် Style ထည့်သွင်းနိူင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ ဖုန်းတွင် Frozenkeyboard မပါရှိပါက Auto သွင်းပေး နိုင်အောင်ထည့်သွင်းထားသည်။ မိမိဖုန်းနှင့် Support မပေးပါက ထည့်သွင်းခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ မိမိဖုန်းနှင့် ကိုက်ညီသော Font ဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်ပြီးမှထည့်သွင်းနိုင်အောင် စီမံပေးထားသည်။ ထည့်သွင်းရန် အညွန်း – – – – မိမိဖုန်းအတွင်းထည့်သွင်းတော့မည်ဆိုပါက Install ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် CUSTOMIZE CURRENT Theme ကိုနှိပ်ပါ။ Font Style ကိုရွေးချယ်ပါ။ မိမိထည့်သွင်းထားသော Font နာမည်ကို Apply လုပ်ပေးပါ။ […]
4.3 MMSD Gapp Installer(Gtalk,Gmail,Playstore သွင်းရန်)
May 14, 2014 |4Replies
Android Version 4.3 တွေ အတွက် Google App များဖြစ်တဲ့ Gmail,Gtalk,Playstore များ ထည့်သွင်းတဲ့ Android Application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ APP ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Root Access ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ App သွင်းလိုက်တာနဲ့ မိမိဖုန်းရဲ့ Android Version ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး Support လို့ရေးထားရင် စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ App ကို အသုံပြုဖို့ data ဖိုင်လိုအပ်ပါတယ်။ Connection ကောင်းရင် Auto Download လုပ်လိုက်ပါ။ […]
How To Creat & Edit MiUi Theme ! CWM Beta For Grand2Duos SM-G7102 !
Honor3C သမားများ ဖန်လုံးကို နိမ့်နိမ့်မြင့်မြင့် တင်ချင်းတိုင်းတင်နည်း ••••••••••
Views (965) | Comments (23)
Views (803) | Comments (1)
Views (756) | Comments (1092)
Views (706) | Comments (114)
Views (535) | Comments (105)
MM Sexy Girl (Myanmar Model များ အလှဓာတ်ပုံစုစည်းမူ)
Views (31594) သိသင့်သောဗဟုသုတများ…..
Views (28530) Huawei ဖုန်း 12 လုံးအတွက် firmware တင်ရင် updtae failed ဖြစ်...
Views (27328) MM Sexy Girl (Myanmar Model များ အလှဓာတ်ပုံစုစည်းမူ)
Views (25726) C8813D,Y300C Auto Root & Zawgyi keyboard
Views (18319) Myandroid v1.4 (Myanmar Android Service Tool)
Views (17188) C8816,C8816D Unlock Bootloader,Auto Root,Auto Myanmar Font (...
Views (15552) Like Us On Facebook! Myanmar Calendar
Android Tutorial (123)
Recovery Mode ထည့်နည်းများ (24)
Root လုပ်နည်းများ (227)